जोरपाटीमा कोभिड अस्पताल संचालन – Dhankuta News : Daily Online News From Nepal
जोरपाटीमा कोभिड अस्पताल संचालन
२०७७, १३ पुष सोमबार २१:४९
धनकुटा, १३ पुष । छथर जोरपाटी गाउँपालिकाको जोरपाटीमा ५ शैयाको कोभिड अस्पताल संचालनमा ल्याएको छ । गाउँपालिकाको सामुदायिक भवनमा सञ्चालनमा आएको उक्त अस्पतालको प्रदेश नं. १ का सांसद ईन्द्रमणि पराजुलीले एक कार्यक्रमका वीच उद्घाटन गरेका छन् ।
सो अवसरमार सांसद पराजुलीले अहिले विश्व नै कोरोनाभाईरसको संक्रमणबाट त्रसित रहेका बताए । उनले यस्तो समयमा संक्रमित रोगीहरुको उपचारका लागि ठूला शहरहरुमा जानु पर्ने अवस्थाको अब अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
सांसद पराजुलीले यो कोभिड अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक सहयोग गर्न आफु सधैं लागि पर्ने विश्वास दिलाए । उनले कोभिडको जोखिम अझै बढ्दै गएकाले मास्क लगाई सचेत हुन आग्रह गरे ।
यस्तै गाउँपालिकाका अध्यक्ष शेरबहादुर लिम्बुले कोरोना भाईरसको संक्रमण समाप्त नभएको बताउँदै यसबाट संक्रमित हुनेहरुको उपचार यहि हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले यस अस्पताललाई व्यवस्थित तवरले सञ्चालन गर्न गाउँपालिकाले मात्र सम्भव नहुने बताउँदै त्यसका लागि केन्द्र तथा प्रदेश सरकारले सहयोग गर्नु पर्ने बताए ।
अध्यक्ष लिम्बुले यस अस्पतालले कोरोना संक्रमितका साथै अन्य विरामीहरुलाई पनि दैनिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिने जानकारी दिए । उनले यस अस्पतालमा डाक्टर प्रसंशा न्यौपानेसहितको ६ जना स्वास्थ्यकर्मीहरुको टोलीले २४ घण्टे सेवा प्रदान गर्ने जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा गाउँपालिका उपाध्यक्ष भीमकला श्रेष्ठ, वडा अध्यक्षहरुका तर्फबाट वडा नं. १ का अध्यक्ष पुखमान आले मगरले अस्पताल सञ्चालन भएपछि यस क्षेत्रका विरामीहरुलाई ठूलो राहत मिल्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
सो अवसरमा संघसंस्थाका तर्फबाट सिंधुवा र चुलाचुली बजार ब्यबस्थापन समितिका अध्यक्षहरु क्रमशः शिब श्रेष्ठ र शारदा प्रसाद दाहाल, केदारनाथ स्मृति प्रतिष्ठानका अध्यक्ष लोकेन्द्र चापागाईं, आदिवासी जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष दिपक गुरुङ, सगरमाथा बोर्डिङ स्कुलका प्रधानाध्यापक दिवेश खड्का, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष निलबहादुर थापा, खजुम लिम्बू प्रतिष्ठानका अध्यक्ष देवकुमार दिम्बू, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका निरीक्षक गोकुल भण्डारी लगायतले अस्पताल सुचारु रुपमा सञ्चालनका लागि शुभकामना दिएका थिए ।
कार्यक्रममा पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तुलराज थापा मगर, वडाध्यक्षहरु क्रमशः ४ का टेकबहादुर घिसिङ, ५ का सुरेन्द्र लिम्बू, ६ का दिलबहादुर थापालगायतको उपस्थिति रहेको पालिकाका स्वास्थ्य संयोजक सुन्दरमान डंगोलले जानकारी दिए ।
धनकुटा अस्पतालमा पीसीआर.परिक्षण गर्ने मेसिन सञ्चालनमा आईसकेकोले यो अस्पताल सञ्चालनमाल्याउन सहज भएको संयोजक डंगोलले जानकारी दिए ।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धमा धनकुटामा विशाल विरोध प्रर्दशन